Raadi haddii ay suurtagal tahay in xiriir fog laga yeesho | Bezzia
Xiriirka masaafada dheer, ma shaqeeyaan?
Susana Garcia | | Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha, Xiriirka
Tani waa su’aal ay dad badani isweydiiyaan, maadaama ay tahay inay iska fogeeyaan sabab kastoo jirta. Guud ahaan, fogeynta badanaa waxaa sabab u ah shaqada ama sababta oo ah qof kale waa inuu beddelaa cinwaankiisa. Laakiin maanta wax badan ayaa jira xiriirka fog maxaa yeelay dad badan ayaa ku kulma internetka oo meel ku dhow kuma noola.
Marka, dhammaantood waxay tixgeliyaan suurtagalnimada xiriir fog oo shaqeynaya sababta oo ah waxay wax u dareemaan qofkaas. Waxaa jira tilmaamo qaarkood oo lagu hagaajinayo xiriirradan, laakiin mabda 'ahaan ma fududa, maadaama masaafada ay xiriir aad u adag ka dhigeyso.
1 Dhibaatooyinka iyo faa'iido darrooyinka xiriirka fog
2 Sida loo hagaajiyo xiriirka masaafada dheer
Dhibaatooyinka iyo faa'iido darrooyinka xiriirka fog
In kasta oo jacaylku dhaco waa wax naga dhigaya inaan rumaysanno inaan wax walba qaban karno, mararka qaarkoodna sidaas maahan. Kuwa badan baa jira dhibaatooyinka la xiriira cilaaqaadkaas masaafada dheer. Midkoodna waa xiriir la'aanta qofka kale. Si kasta oo aan jaceyl u nahay, waxaa lagama maarmaan ah in la taabto oo la dareemo qofka kale si dareen badan oo shucuur leh ay u dhacdo. Haddii kale masaafada ayaa qaboojin doonta xiriirka sababo la xiriira xiriir la’aan jirka ah.
Dhibaatada kale ee weyn ee soo baxdaa waa tan cilaaqaadkaas ma jiro galmo iyo galmo waa qayb aad muhiim u ah lamaane. Haddii tani shaqeyn weydo, xiriirku ma shaqeyn karo mustaqbalka fog. Tanina waa ka walwal badan tahay haddii xiriirku fogaado oo aysan labada is arkeynin.
ka masayrka noocan ah xiriirka waa soo noqnoqdaHagaag, ma hayno qofka kale ee ag jooga si aan u ogaano waxa ay sameynayaan ama aan ogaan karno hadii ay runti wali dareemayaan isku mid. Tani waxay inaga buuxinaysaa hubin la’aan iyo shaki, taas oo had iyo jeer isu rogta hinaase haddii qofka kale uu iska fogeeyo ama uu yaqaano dad kale.
Kuwani kuwan cilaaqaadka sidoo kale waxaa jira dhibaatada ka dhalan la'aanta. Dad badan ayaa ku raaxaysta inay ku dhexjiraan xiriir masaafo dheer oo ay qofka u arkaan hal mar mar uun maxaa yeelay iyagu ma doonayaan inay tanaasul sameeyaan.
Sida loo hagaajiyo xiriirka masaafada dheer
Xiriirka masaafada dheer waa lagama maarmaan sameyso xiriir jireed waqti ka waqti. Tani waxay naga caawineysaa inaan dareemo qofka kale iyo inaan aqoonsano inay runti weli isku mid dareemayaan. Intaas waxaa sii dheer, cilaaqaadka ka bilaabma khadka tooska ah ee dadku wali is aqoonin, waxaa aad muhiim u ah in qofba qofka kale is arko. Had iyo jeer waa inaad ogaataa haddii aan leenahay soo jiidashadaas oo si dabiici ah u dhexeysa labada. Waxaan jeclaan karnaa qof laakiin haddii aan dareenno in soo jiidashada iyada ay ka duwan tahay. Taasi waa sababta ay tahay inaad u kulantaan waqti ka waqti oo aad ku dadaashaan sidii aad isu arki laheen.
La Xiriirku aad ayuu muhiim ugu yahay xiriirka noocan ah. Isma arki karno maalin kasta runtiina way adag tahay in laga ogaado qofka kale. Haddii masaafadani tahay mid kumeelgaar ah, way fududahay in la qaado, laakiin haddii aysan ahayn, ugu dambayn waan joojin karnaa la xiriirka qofka kale. Haddii aan la xiriirno oo aan isu sheegno waxyaabahayaga ugu muhiimsan, waxaan ogaan doonnaa inaan ku kalsoonaan karno qofkaas iyo inay iyagu dan naga leeyihiin. Waa muhiim in la wada hadlo lana muujiyo xiisaha qofkaas kale si loo ilaaliyo xiriirka.
La is aaminku waa inuu noqdaa tiir xiriirka noocan ah. Inaan ka fogaanno, cilaaqaadyadu waxay abuuri karaan shaki, maxaa yeelay garan mayno waxa qofkaas kale sameynayo. Taasi waa sababta ay tahay inaan u aaminno oo qofka kale nagu kalsoonaado ama hooska masayrku wax walba wuu kharribi karaa, xitaa marka aysan jirin sababo loo masayro.
Sidaa darteed haddii aad ku jirto xiriir fog oo aad rabto inaad shaqeyso, maskaxda ku hay arrimahan. Maxaad u maleyneysaa xiriirka noocan ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka masaafada dheer, ma shaqeeyaan?
Istaraatiijiyooyin Awood leh oo Caruurtaadu ugu Shaqeeyaan Guriga
Sida loo doorto burushka timahaaga